Izindaba - I-OEM Hydraulic Fittings
Kungakhathaliseki ukuthi uyinkampani ephethe ilungelo lobunikazi noma inkampani ethatha umkhiqizo usuka kumqondo uyiswe ekufezekeni, ukunemba nokunemba kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zokusebenza Zokukhiqiza Izisetshenziswa Zoqobo. Ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo wokugcina ithuthukisa isikhathi sokumaketha nokwaneliseka komsebenzisi wokugcina, okuzuzisa wonke umuntu.
Thuthukisa amandla akho okulawula uketshezi lwe-OEM ngokufakwa nama-adaptha avela e-Hainar Hydraulics. Imikhiqizo yethu yakhiwe ngensimbi engagqwali, eqinile, ehlanzekile futhi elwa nokucekelwa phansi.
Ama-OEM Azuza Kanjani Kunsimbi Engagqwali?
Uma kukhulunywa ngemikhiqizo yokukhiqiza, ama-OEM avame ukubhekana nesinqumo sokwakha ingxenye yasendlini noma ukukhiphela leyo nto enkampanini esebenza ngokukhethekile kulowo mkhakha.
Kwa-Hainar Hydraulics, siyakwazi ukulawula uketshezi. Ukufakwa kwethu kwensimbi engagqwali nama-adaptha kukunikeza inkululeko nokuvumelana nezimo ukuze uphathe uchungechunge olubanzi lwezimo zokugeleza koketshezi. Lo mndeni wama-alloys asekelwe ku-iron uqinile, awukwazi ukugqwala, futhi uhlanzekile. Izici eziqondile zokusebenza ziyahlukahluka ngokwebanga, kodwa izici ezivamile zihlanganisa:
Insimbi engagqwali inamanani aphezulu e-chromium, ekhiqiza ifilimu ye-oxide engabonakali futhi eziphilisayo ngaphandle kwento ethile. Indawo engenazimbobo ivimbela ukungena komswakama futhi yehlise ukugqwala nokubhoboza kwemifantu.
Impahla futhi ayisekeli isikhunta, isikhutha, nokukhula kwesikhunta, okuzuzisayo lapho kwenziwa imikhiqizo enezidingo eziphakeme zokuhlanzeka noma zokuhlanzeka. Ukusebenzisa isicoci esilula se-antibacterial ebusweni bensimbi engagqwali kuqeda amagciwane ayingozi nama-virus.
Ukuthuthukisa Izinqubo Zokudluliswa Kwe-OEM Fluid
I-Hainar Hydraulics ikhiqiza izifakelo zensimbi engagqwali ezijwayelekile nezingokwezifiso zama-OEM. Noma ngabe uhlelo lwakho lokusebenza ludinga ukuvikela ekugqwaleni noma ukumelana nezingcindezi ezinamandla, sinesixazululo somkhiqizo wokulawula uketshezi.
Sihlinzeka ngokufakwa kwe-OEM hydraulic kanye namanye amadivaysi okulawula uketshezi ezinkampanini ezisebenza ezimbonini eziningi. Izibonelo zifaka:
• Uwoyela Negesi
• Ukudla Nesiphuzo
• Imikhiqizo yabathengi
• I-Stainless Steel OEM Hose Manufacturers
Isiqiniseko esisodwa somkhakha we-OEM ushintsho. Imiklamo nemibandela yokwamukela iyehluka ngokwekhasimende, kwesinye isikhathi ngisho nomsebenzi. Ukufakwa okujwayelekile nama-adaptha akuhlali kuhle kakhulu kuhlelo lokusebenza.
Thola okukufanelayo noma i-adaptha yesimo sakho sokulawula uketshezi nge-Hainar Hydraulics. Singakwazi ukwenza imikhiqizo yangokwezifiso ehambisana nezidingo zakho. Umnyango wethu wokwenziwa kwangaphakathi wakhiwe ngomakadebona abakwazi ukwenza lezi zinqubo ezilandelayo:
Sinqamula ukuxhumana okunentambo ngokunemba. Ukuhlola ukuqhuma kwepayipi kusayithi kufika ku-24,000 pounds-per-square-intshi kuyatholakala. Isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi azikho izindlela zokuvuza ezikhona futhi amadivayisi angabamba izingcindezi ezifiswayo.
Ukusiza ama-OEM Ukuletha Imikhiqizo Emakethe
Kwa-Hainar Hydraulics, siyazi ukuthi iminqamulajuqu ibalulekile kuma-OEM kanye nozakwethu bochungechunge lokuhlinzeka. Kungakho sigcina i-inventory ebanzi yokufakwayo nama-adaptha esitokweni futhi elungele ukuthunyelwa. Ukuzinikela kwethu ekuguquleni ama-oda ngokushesha akuzikhiphi ikhwalithi, nokho. Zonke izinto esizenzayo zihlangabezana ne-ISO 9001:2015 izindinganiso zokuqinisekisa ikhwalithi zokufakwa, ukukhiqizwa, kanye nenkonzo. Izinombolo zezingxenye, izinombolo ze-serial, izinombolo zeqoqo, amakhodi okukopela, nanoma iyiphi enye indlela yokulandeleka ingafakwa nge-laser emikhiqizweni.